Ahoana no mandaitra - NYE Countdown ho an'i Djs, Vjs, Nightclubs 2021
Login / Mamorona kaonty
very ny kodiaranao izao
Fetiben'ny DJ malaza
Miaina amin'ny hetsika!
Ny ofisialy NYE Countdown ho an'ny 2021 dia iray amin'ireo fitaovana matanjaka amin'ny fanatanjahantena DJ sy Nightclub Taom-baovao matanjaka indrindra. Efa an-taonany maro izahay no tao amin'ny indostrian'ny 20 ary nanova ny fomba nanamboaran'ny DJ, Nightclubs sy ny toerana fandraisana vahiny. Ireo mpamokatra ny NYE Countdown ofisialy dia vanim-potoana DJ sy mpikarakara ny trano fisakafoanana / trano fisakafoanana nanomboka tamin'ny voalohan'ny 1990 tany aloha. Nandritra izany fotoana izany dia nahatsikaritra isan-taona izy ireo, tany amin'ny tsena sy toerana maro eran'izao tontolo izao, fa nidina ny vahoaka sy ny mpanjifany raha vantany vao tamin'ny misasakalina ny taom-baovao. Noho izany, namaha vahaolana mahaliana ry zareo…
Tamin'ny voalohany efatra no noforonin'izy ireo "NYE Customised Countdown" amin'ny endrika audio. Avy eo, taona vitsy taty aoriana dia namorona ny 4K, sary mihetsika mahery vaika izy ireo izay nanova ny fetin'ny Taom-baovao eran-tany.
Ny NYE Countdown dia namboarina miaraka amin'ireo anarana voarain'ny DJ sy ny toeram-pivarotana matihanina anarana sy ny sahanin'orinasa amin'ny vatan'izy ireo.
Ny NYE Countdown ofisialy dia mamorona mahavariana "Antoko-ny-alina" angovo any amin'ny toerana izay mitazona ny vahoaka mandihy, mandray anjara ary misotro fomba handresena ny fahatapahan'ny misasak'alina mba hanamafisana sy hampitomboana ny tombom-barotra eo amin'ny bara!
Ny NYE Countdown dia famandrihana fanao isan-taona ho an'ny mpianatra matihanina Disc Jockey, Mobile DJs, VJ's na Video Jockey, Nightclubs, Bar, Radio Radio, Casinos, Hotely, Resorts, Pool Pools ary fialamboly toerana.
Ny kaontin'ny NYE ofisialy dia misy amin'ny fiteny 4; ENGLISH, ESPAÑOL, FRANÇAIS & DEUTSCHE.
Safidio ny karazana kaontinao. Ampidiro ny marikao, ny anjara amin'ny feo mahazatra sy ny endrika formato ary ny safidy hafa azo alaina.
Raiso ny fanisana
Raiso amina kajikajy manokana alohan'ny fetin'ny Taom-baovao, GOTRA! (* Matetika, ora 48-72 rehefa avy mametraka ny baikonao ianao)
Press Press Ao amin'ny 11: 56PM & Mandehana lavitra!
Dia izay! Jereo fotsiny ny filalaovana ao amin'ny rafitrao ao amin'ny 11: 56 hariva amin'ny Taom-baovao ... ary jereo ny zava-mahagaga mitranga eo anoloanao. Milalao an-tserasera, mandehandeha, ary jereo ny olona lasa adala! (* kitapo tsy tafiditra ao, lol)
Zo rehetra voatokana © 2019 - 2020 NyeCountdown.com, llc Omena ny vokatra sy ny serivisy rehetra tsy misy mozika noforonina. Ny ampahany sy ny maodely voakaly efa nomanina ho an'ny DJ matihanina ihany no omenay ny mozika fahazoan-dàlana manokana azy ireo. Ny atiny rehetra amin'ny mozika tafiditra ao, fa tsy voafetra ho amin'ny fanisana; eto amin'ity tranonkala ity dia natao ho an'ny fampiroboroboana sy fampisehoana fotsiny. politika fiarovana fiainan'olona